သူမကိုယ်တိုင်လည်း သားနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်လို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့မိဘတွေ ကိုယ်စားဝမ်းနည်း ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်ဆိုတဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့် – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ ထူးခြားလှပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပရိသတ်တွေကြားအရမ်းကို ရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့သလို ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးထားသူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင်ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ကတော့ လတ်တလောအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ ရပ်တည်နေသလို သားနှစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်တာမို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ မိဘတွေကိုယ်စား အရမ်းဝမ်းနည်းကိုယ်ချင်းစာ ခံစားမိတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြလာပါတယ်..။ ပြည်သူတွေဝမ်းနည်းနေရသလို သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝမ်းနည်း ကြေကွဲနေရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေနဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေအတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး နဲ့အတူ ပြောပြထားတာပါ..။
“ဒီနေ့ က မေလေးရဲ့ သားကြီးလေး အောင်ကျော်ကျော်ပိုင်@kyaw kyaw လေး၁၁ နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်. သားကြီးလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ နေ့စဉ်လဲ ကုသိုလ်ပြုနေသလို ပဲ ဒီနေ့မှာလဲ လှု ဒါနိးကုသိုလ် ယူခဲ့ပါတယ် .သားကြီးမွေးနေ့ မှာ သားကြီးက မေလေးတို့ကိုကန်တော့တော့ လေးနက်တဲ့ဆုလေးတွေပဲ ပေးခဲ့ပါတယ် . သားကြီးလေး ရဲ့ဘဝ့ မှာ အကြင်နာတရားရှိသော , လူ ပီသ သော , အားကြီးတိုင်း အနိုင်မကျင့်သော, မုသားမသုံးသော, ငါးပါးသီလမြဲသော ,ငဲ့ညှာ ပြီး တကိုယ်ကောင်းစိတ်မရှိသော, တာဝန်သိသော , ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ သော အများအမှန် ခွဲခြားနိုင်စွမ်း ရှိပြီးအမှန်တရားဘက်က ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲရပ်တည်ရဲသော မိဘ လူမျိုး တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာပြည့်စုံ ပြီး အသက်ရှည်တဲ့ သားကောင်းလေးဖြစ်ပါစေ လို့ ပြုသမျှထူးမြတ်တဲ့ ကုသိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ ဆို ဆုတောင်းပေးပါတယ် . သားကြီးလေး ဖြစ်ချင်တဲ့ဆု မြတ်ဆုကောင်း မှန်သမျှ တောင်းတတိုင်းပြည့်ဝပြီးအသက်ရှည်ပါစေ . ဒီနေ့ က သားကြီးမွေးနေ့မို့ အမှတ်တရနောက်နှစ်အမှတ် တရပြန်ပေါ်လာအောင်တင်တာပါ . နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဝမ်းနည်း နေချိန်မို့ မေလေးကိုယ်တိုင်လဲဝမ်းနညးကြေကွဲ နေရလို့ဘာဓာတ်ပုံ မတင်တာပါ ရှင်
သူမကိုယတြိုငလြညြး သားနှစယြောကမြိခငဖြှစလြို့ ကဆွုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငြးတှရေဲ့မိဘတှေ ကိုယစြားဝမြးနညြး ကိုယခြငြွးစာမိတယဆြိုတဲ့ ဇငဇြငဇြောမြှငြ့
ပရိသတကြှီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ ထူးခှားလှပတဲ့ မကွဝြနြးတစစြုံကို ပိုငဆြိုငထြားပှီး ပရိသတတြှကှေားအရမြးကို ရပနြေးစားအောငမြှငခြဲ့သလို ဇာတကြားတှလညြေး ရိုကကြူးထားသူလေးကတော့ သရုပဆြောငဇြငဇြငဇြောမြှငြ့ပဲ ဖှစပြါတယြ..။ ဇငဇြငဇြောမြှငြ့ကတော့ လတတြလောအခှအနေတှနေေဲ့ ပတသြကပြှီး ပှညသြူတှေ နဲ့အတူ ရပတြညနြသလေို သားနှစယြောကြ မိခငဖြှစတြာမို့ ကဆွုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငြးတှရေဲ့ မိဘတှကေိုယစြား အရမြးဝမြးနညြးကိုယခြငြွးစာ ခံစားမိတဲ့အကှောငြးလေး ပှောပှလာပါတယြ..။ ပှညသြူတှဝမြေးနညြးနရသေလို သူမကိုယတြိုငကြလညြး ဝမြးနညြး ကှကှေဲနရတေဲ့ အကှောငြးလေးတှနေဲ့ ကဆွုံးသှားတဲ့သူရဲကောငြးလေးတှအတှေကြ ယူကှုံးမရဖှစရြတဲ့ အကှောငြးလေးတှကေို ဒီကနမှေ့ာကရွောကတြဲ့ သားဖှစသြူရဲ့ မှေးနဆေု့တောငြးလေး နဲ့အတူ ပှောပှထားတာပါ..။
“ဒီနေ့ က မလေေးရဲ့ သားကှီးလေး အောငကြွောကြွောပြိုငြ@kyaw kyaw လေး၁၁ နှစြ ပှညြ့မှေးနဖှေ့စပြါတယြ. သားကှီးလေးရဲ့ မှေးနမှေ့ာ နစေ့ဉလြဲ ကုသိုလပြှုနသလေို ပဲ ဒီနမှေ့ာလဲ လှု ဒါနိးကုသိုလြ ယူခဲ့ပါတယြ .သားကှီးမှေးနေ့ မှာ သားကှီးက မလေေးတို့ကိုကနတြော့တော့ လေးနကတြဲ့ဆုလေးတှပေဲ ပေးခဲ့ပါတယြ . သားကှီးလေး ရဲ့ဘဝ့ မှာ အကှငနြာတရားရှိသော , လူ ပီသ သော , အားကှီးတိုငြး အနိုငမြကငွ့သြော, မုသားမသုံးသော, ငါးပါးသီလမှဲသော ,ငဲ့ညှာ ပှီး တကိုယကြောငြးစိတမြရှိသော, တာဝနသြိသော , ကိုယကြွိုးမငဲ့ သော အမွားအမှနြ ခှဲခှားနိုငစြှမြး ရှိပှီးအမှနတြရားဘကကြ ကိုယကြွိုးမငဲ့ပဲရပတြညရြဲသော မိဘ လူမွိုး တိုငြးပှညနြဲ့ ကိုယကြငွ့သြိကျခာပှညြ့စုံ ပှီး အသကရြှညတြဲ့ သားကောငြးလေးဖှစပြါစေ လို့ ပှုသမွှထူးမှတတြဲ့ ကုသိုလတြှနေဲ့သဈစာ ဆို ဆုတောငြးပေးပါတယြ . သားကှီးလေး ဖှစခြငွတြဲ့ဆု မှတဆြုကောငြး မှနသြမွှ တောငြးတတိုငြးပှညြ့ဝပှီးအသကရြှညပြါစေ . ဒီနေ့ က သားကှီးမှေးနမေို့ အမှတတြရနောကနြှစအြမှတြ တရပှနပြေါလြာအောငတြငတြာပါ . နိုငငြံသူနိုငငြံသားတှဝမြေးနညြး နခွေိနမြို့ မလေေးကိုယတြိုငလြဲဝမြးနညးကှကှေဲ နရလေို့ဘာဓာတပြုံ မတငတြာပါ ရှငြ